Kilemaina voatosika tao anaty taxibe : Tokony hiakatra Fitsarana omaly ny raharaha fa nahemotra indray - ewa.mg
News - Kilemaina voatosika tao anaty taxibe : Tokony hiakatra Fitsarana omaly ny raharaha fa nahemotra indray
Azo lazaina fa fahakiviana tanteraka ny nahazo ny mpitory,izay tsy iza fa lehilahy manana kilema ara-batana ka niharan’ny lozam-pifamoivoizana teo Ambohijatovo, raha tonga teny amin’ny Fitsarana Anosy omaly maraina mba hiatrika Fitsarana. Nahemotra amin’ny 11 Febroary indray ny Fitsarana momba io lozam-pifamoivozana nahazo azy io rehefa nangataka izany ny mpisolovavan’ilay orinasam-piantohana miadidy ilay fiara nahavanon-doza taminy. Nahagaga ihany izany satria raha dinihina ny zava-misy dia tsy dia misy idiran’ny orinasa fiantohana loatra angamba ny zava-nitranga tamin’ity lehilahy ity izay tsorina fa mpamao gazety ao amin’ny orinasan-tserasera iray eto Andrenivohitra na dia sembana aza. Raha tsiahivina ny tantara dia fiara mpitatitra ao main’ny zotra 161 no mifanandrina aminy amin’izao raharaha izao. Araka ny fitantarany, niandry bus 161 teo Ambohijatovo (Arrêt eo amin’ny Boky) izy tamin’ny Alatsinaina 22 oktobra 2018 fa handeha hody avy niasa. Maro ny olona niandry teo ka mba isan’ny nisisika teo izy rehefa naka sisiny amin’ny fijanonana iny ilay fiara. Hitan’ilay resevera izay tao anaty fiara fa sembana eo amin’ny tongotra ranamana ka noraisin’ity voalohany tamin’ny sandriny mba hanampiana azy hiakatra tao anaty fiara. Nandeha tampoka anefa ny fiara ary namonjy ny “fil” ilay hidina ho any Andohan’Analakely iny. Somary notarihin’ilay receveur kely sahabo ho iray metatra na mahery kely teo ity mpanao gazety ity, izany hoe lasa tafiditra any amin’ny faritry ny arabe, araka ny fitantarany. “Nefa dia navotsiny aho avy eo fa ny varavarana no novonjeny nohidina haingana” hoy izy nanazava araky ny fitoriana izay napetrany teo anivon’ny Fitsarana. Maika hitsoaka ilay taxibe 161 iray hafa vao tonga avy aorianany angaha ilay mpamily fa sao tratran’ny “adversaire” no nampitroatra azy tampoka, raha araka ny filazan’ireo olona nanatri-maso. Vokatr’izay, niakarapoka nianjera tamin’ny arabe ity olona sembana ity. Fa ny tena loza dia saika voahitsaky ny fiara iray hafa nisosa tao aorian’io taxibe saika niarahany io, saingy tsara hisatra ity farany ka afaka nijanona tampoka.
L’article Kilemaina voatosika tao anaty taxibe : Tokony hiakatra Fitsarana omaly ny raharaha fa nahemotra indray a été récupéré chez Midi Madagasikara.
« e-Visa » elektronika: ho hentitra ny polisy
Ho hentitra ny fanaraha-maso apetraky ny polisy hijerena ny fivezivezen’ireo vahiny tonga eto Madagasikara. « Misokatra izao ny fanalavana ho 90 andro ny fe-potoana ahafahan’ireo mpizahantany mivezivezy eto amintsika. Nanomboka, omaly, izany eo amin’ny fampiasana ny « Visa » elektronika – e-Visa », hoy ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fifindra-monina eto Madagasikara, ny commissire principal de police, i Samy Harison Olivier, omaly.Hitarina amin’ny faritra maro izany raha fanombohana ihany ny eto Antananarivo mba hanaraha-maso amin’ny fampiasana « Visa » elektronika eny amin’ny seranam-piaramanidina rehetra ho an’ny faritany enina. Manampy izany ny any Sainte-Marie sy ny any Nosy-Be ary ny any Taolagnaro, miaraka amin’i Toliara. Natao izao ezaka izao ho fanaraha-maso ny fiveziven’ny vahiny mpizahatany. Ahafahana koa manara-maso ny vola vahiny miditra eo anivon’ny kitapom-bolam-panjakana. “Nanomboka ny 1 janoary 2018 ny fanaovana io“Visa”elektronika io ary niarahana tamin’ny Madaozi”, hoy ny tale misahana ny serasera eo anivon’ity orinasa ity, Marie – Annick. Ezahina hampiakarina dimy hetsy ny vahiny mpizahatany ho tonga eto amintsika amin’ity taona ity raha telo hetsy izany teo aloha io, miainga amin’izao fanovana sy fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fampitaovana izao.Synèse R. L’article « e-Visa » elektronika: ho hentitra ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Jly Rakotonirina Richard: hatao hazalambo ireo dahalo namono ny GP2C Rakotonirina Alain
Tonga nanome voninahitra ny fanaovam-beloma farany ny zandary ny mpitandro filaminana iray lavon’ny dahalo tany Antsira kaominina Belo sur Mer ny minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN), ny Jly Rakotonirina Richard, omaly tao amin’ny tobin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Fianarantsoa. Taorian’izany, namangy sy naneho fiiaraha-miory ary nankahery ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa tamin’i GHC Rakotonirina Alain Patrick ny delegasiona notarihin’ny MDN. Nasondrotra ho amin’ny laharam-boninahitra GP2C (Gendarme principal de deuxième classe) Rakotonirina Alain Patrick ary notolorana ny mari-boninahitra « Chevalier de l’ordre national » noho ny asa tsara vitany tamin’ny firenena. Eo anatrehan’ny tranga toy izao, mijoro ary miombona alahelo tanteraka amin’ny tompo-manjo amin’ny maha tompon’andraikitra voalohany azy eo anivon’ny Foloalindahy ny MDN ho mariky ny firaisan-kina efa nisy hatramin’izay eo amin’ny samy mpitandro filaminana rehetra dia ny Tafika, ny zandarimaria ary ny polisim-pirenena.Jean ClaudeL’article Jly Rakotonirina Richard: hatao hazalambo ireo dahalo namono ny GP2C Rakotonirina Alain a été récupéré chez Newsmada.
Naondrana antsokosoko: takina amin’i Maorisy ny hampodiana ny volamena 25,5 kilao
Tinapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny 7 oktobra teo, ny hanombohana ny dinika ara-diplaomatika iarahana ny Nosy Maorisy ny hamerenany amin’i Madagasikara ny volamena milanja 25,5 kilao.Malagasy miisa telo tratra nanondrana antsokosoko volamena milanja 25,5 kilao, niampy lelavola 7 000 euros, tatsy Nosy Maorisy, ny 10 janoary 2019. Nogiazan’ny fanjakana maorisianina ireo entana ireo. Saika hoentina any Dubai sy any Mumbai India ireo volamena sy vola ireo.Efa nivoaka teto Madagasikara ny didim-pitsarana ny tokony hamerenana ireo harena an-kibon’ny tany ireo aty amintsika, sy ny onitra ary ny sazy ho an’ireo olona nanondrana antsokosoko. Minisitera efatra ny hifarimbona hanao ny dinika rehetra ahafahana mamerina azy eto Madagasikara. Nilaza ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo, omaly, fa efa ao anatin’ny fifampiraharahana ny fadin-tseranana malagasy sy maorisianina.Efa notapahin’ny filankevitry ny minisitra, ny 30 septambra teo, ny hanagiazan’ny fanjakana ary ho lasa fananam-pirenena ireo volamena ireo ka hapetraka avy hatrany any amin’ny Banky foiben’i Madagasikara. Toraka izany koa izay volamena hafa rehetra, tratra sy aondrana antsokosoko miainga eto amintsika.Rambon-tanin’i MadagasikaraAnkoatra izany, nilaza koa ny minisitra Ravokatra Fidiniavo fa hiroso amin’ny fanadihadiana ara-tsiantifika mikasika ny rambon-tanin’i Madagasikara ny fanjakana. Antontan-kevitra takin’ny Firenena mikambana amin’ny famaritana ny sarintanin’i Madagasikara izany, araka ny fangatahana natao ny taona 2011. Any amin’ny tendrony atsimon’i Madagasikara, eo anelanelan’i Toliara sy i Taolagnaro, ny misy ity rambon-tany ity, tombanana manodidina ny 860 000 km2. Vinavinaina fa hiarahana amin’ny manampahaizana sinoa ny fanatanterahana ity fanadihadiana siantifika ity. Misy otrikarena tsy hita noanoa ity toerana ity, toy ny solika, ny entona na ny gazy, ny hazandrano sy ny zavamananaina samihafa. “Miisa enina ny raharaha dinihin’ny ONU, mialoha an’i Madagasikara, ka tsara raha efa vonona mialoha isika”, hoy ihany ny minisitra.Tsy voakasik’izany kosa ny Nosy manodidina an’i Madagasikara, toy ny Iles Eparses, izay mbola fitakiana hafa indray.Njaka AndriantefiarinesyL’article Naondrana antsokosoko: takina amin’i Maorisy ny hampodiana ny volamena 25,5 kilao a été récupéré chez Newsmada.
Mpirahavavy tra-doza tamin’ny moto: niparitaka ny atidohan’ilay nentina, naratra mafy ilay nitondra
Ankoatra ireo mpirahalahy am-panambadiana nitondra moto, samy namoy ny ainy teny amin’ny lalam-pirenena fahafito, maty tsy tra-drano koa ny iray tamin’ireo mpirahavavy tra-doza, tetsy Ambodiafontsy Ampitatafika, omaly antoandro, raha naratra mafy ny zandriny.Nandriaka tanteraka ny ra teny Ambodiafontsy Ampitatafika, lalam-pirenena voalohany, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 01 ora sy 30mn. Mpirahavavy, 22 sy 25 taona nanao taingin-droa tamin’ny moto, avy any Fenoarivo hihazo an’Ampitatafika ireto tra-doza. Maty tsy tra-drano ilay zokiny, izay noentina raha naratra mafy kosa ilay mpitondra. Niresaka ireo mpirahavavy ary samy mbola nitoditodika ihany koa nefa mbola nandeha mafy ihany. Vokany, nidona mafy tamina rindrim-bato ilay moto scooter. « Voatsindrin’ny moto tamin’izany ilay noentina ka potika, nipotsaka mihitsy ny atidohany », araka ny fanazavan’ny zandary ao Fenoarivo, nanao ny fanadihadana. Tsy naharo azy ilay aroloha (casque), izay vaky niparitaka ka izay no nahavoa ny lohany. Naratra mafy kosa ilay zandriny, izay nitondra ilay moto; nisy kiaka ny lohany, tapaka ny foton-tanany havanana… Naratra ihany koa teo amin’ny tongony. Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nijery ny zava-nisy. Teo no ho eo, nalefa notsaboina eny amin’ny HJRA ilay naratra ary naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly eny Fenoarivo koa ilay namoy ny ainy.Vokatry ny fandehanana mafy…Fa ankoatra izay, lozam-pifamoivoizana iray hafa, vokatry ny fandehanana mafy tamin’ny moto koa no nitranga teo Amboniriana, kilaometatra vitsivitsy alohan’ny hidirana an’Ambatolampy, omaly maraina. Mpirahalahy am-panambadiana ireto niharan-doza, niara-namoy ny ainy ireto, raha nifanehatra tamin’ny fiarabe an’ny orinasa Star ilay moto nentin’izy ireo. “Avy any Ambatolampy hihazo an’Antananarivo ilay moto ary teo amin’ny fiholahan-dalana no nitranga ny loza”, hoy ny fanazavan’ny zandary avy ao Ambatolampy. Nandeha mafy ny moto ka nidona tampoka tamin’ilay kamiao. Vokany, nianjera mafy ireo mpandeha ka nitarika tamin’ny fahafatesany teo no ho eo izany. Taorian’izay, tonga teny an-toerana ny zandary sy ny dokotera nijery ny zava-nisy. Ny vata-mangatsiakan’ireo lehilahy 20 taona sy 35 taona kosa nalain’ny fianakaviany, raha notazonina vonjimaika ao amin’ny biraon’ny zandary hanaovana fanadihadiana ny mpamily ilay kamiao.Henintsoa HaniL’article Mpirahavavy tra-doza tamin’ny moto: niparitaka ny atidohan’ilay nentina, naratra mafy ilay nitondra a été récupéré chez Newsmada.
Festival SAR’nao: mitohy eny Tsimbazaza ny fampirantiana
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny Festival SAR’nao… Tanterahina eny Tsimbazaza, ao amin’ny biraon’ny « Direction des arts de la culture et de la vie communautaire » (Institut du métier de la Ville, teo aloha) ny fanohizana ny fampirantiana sary pika. Mpaka sary roa, Raelisaona Mamy na i Mamyrael sy Dave Fangitse no mampiranty ireo sary nalainy ka mifandraika amin’ny lohahevitry ny Iray volan’ny sary : « « Images innées, Covis-19 » – Focales croisées). Ho an’i Mamyrael mahatratra 36 ny sary pika harantiny raha 26 kosa ny an’i Dave Fangitse.« Sary nalaina nandritra ireny volana nampasiaka ny covid-19 teto Madagasikara avokoa ireo sary nalaiko ireo. Ny fiainana andavanandro sy ny niatrehana ny valanaretina Covid-19. Anisan’izany ny tanàna mangiana tsy ahitana olona mandeha, ny fanaovana fitiliana, ny fampiharana sazy ho an’ireo tsy manaja fepetra, ny nanatontosana ny fanamarihana ny 26 jona, sns”, hoy i Mamyrael. Marihina fa mpaka sary anisan’ny manana traikefa matanjaka tokoa i Mamyrael. Saika nalainy sary pika avokoa ny zava-niseho mandritra ireo vanim-potoana lehibe nodiavin’i Madagasikara. Anisan’izany ny « krizy 2009 »…Fantatra fa hoentina any Ihosy ity fampirantiana ity, aorian’ny asabotsy 28 novambra izao izay fotoana hifaranan’ny ranty etsy Tsimbazaza.HaRy RazafindrakotoL’article Festival SAR’nao: mitohy eny Tsimbazaza ny fampirantiana a été récupéré chez Newsmada.